2,177,309 nde ndị ọbịa: Mmasị zuru ụwa ọnụ na Honduras na-eme ka mmụba na njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » 2,177,309 nde ndị ọbịa: Mmasị zuru ụwa ọnụ na Honduras na-eme ka mmụba na njem
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Akụkọ gbasara Honduras • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Mgbe Honduras kwadoro thetù Na-ahụ Maka Njem Nlegharị Worldwa nke World Commission maka nzukọ America na izu gara aga, ọ nwere nnukwu akụkọ iji kọọ: mmụba na ndị njem nleta na mba ụwa na mmefu, mmụba na ọnụ ọgụgụ ndị njem ụgbọ mmiri na oku ọdụ ụgbọ mmiri, na ndozi na njikọ ikuku n'etiti ha.
Dabere na ụlọ ọrụ njem njem nke Honduran (IHT), ndị njem njem mba ụwa dị 2,177,309 gara Honduras na 2016, ma e jiri ya tụnyere 2,092,700 na 2015. Mmefu njem njem mba ofesi ruru US $ 685.6, site na US $ 675.6 nde na 2015.
Linesgbọ elu ụwa dịka Spirit Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Avianca Airlines na United Airlines so na ndị na-efe Honduras, na-enye ụgbọ elu na-enweghị nkwụsị site na Fort Lauderdale (awa 2), Miami (awa 2), Houston (awa 3), Atlanta (awa 3.5) na obodo ndị ọzọ dị mkpa. Ná ngwụsị nke Eprel, obodo mmepụta ihe nke Honduras nke San Pedro Sula malitere inweta ụgbọ elu Air Europa na-esite na Madrid, Spain, na-egosi akara ngosi ọhụụ maka njikọta nke mba Central America.
Pgbọ elu San Pedro Sula, Tegucigalpa na Roatán anọwo na-enweta ụgbọ elu mba ụwa. Palmerola International Airport, nke dị nso na obodo colonial nke Comayagua, ga-emeghe ọnụ ụzọ ya maka ndị njem mba ofesi na mbubreyo 2018.
Dabere na ọnụ ọgụgụ ọdụ ụgbọ mmiri, ndị njem njem 1,052,738 rutere n'ụsọ osimiri Honduran na ụgbọ mmiri 341 na-akpọ Roatán na ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ na Honduran na 2016, mmụba 14.7 pasent karịa ọnụ ọgụgụ ndị njem nke afọ gara aga. Ọtụtụ ụgbọ mmiri na njem ndị njem na Houston, Tampa, Fort Lauderdale, Miami na New Orleans ugbu a gụnyere nkwụsị na Honduras dị ka akụkụ nke njem ha.
Honduras dịkwa mpako ịbụ otu n'ime mba ụwa iji nye ndị ọbịa mkpuchi njem dịka akụkụ nke ọnụahịa tiketi ụgbọ elu mba ụwa. Iwu ahụ na-enye ndị ọbịa ohere ịnweta enyemaka mgbakwunye na ihe ọghọm, ọrịa na ihe ọghọm njem ndị ọzọ.
Osimiri na ndakpu mmiri
N’ịbụ nke dị na Caribbean na oke Mesoamerican Barrier Reef, usoro nke abụọ kachasị ukwuu n’ụwa, Bay Islands so na njem kacha mkpa njem nlegharị anya na Honduras. West Bay Beach dị na Roatán natara onyinye onyinye njem nke njem njem 2017 maka osimiri kachasị mma na Central America na otu n'ime osimiri 25 kachasị mma n'ụwa. Frommer si pụta ìhè Roatán na Undiscovered Caribbean Islands: Insiders 'Guide; na HGTV show House Hunters International gosipụtara Roatán n'ọtụtụ ngosipụta, na Magazine Magazine depụtara Roatán dị ka otu n'ime ezigbo agwaetiti kachasị mma ịla ezumike nká. Utila, ka ọ dị ugbu a, na-eme ndepụta nke saịtị kachasị elu nke ụwa. Ndị ọbịa na-enubata na Bay Islands iji snorkel, na-egwu mmiri ma na-egwu mmiri n'etiti anụ mmiri dị iche iche dịka azụ whale shark, mantas, dolphins ọhịa, turtles na ụlọ akwụkwọ azụ. Ha nwekwara ike ịnụ ụtọ mmemme mmiri ndị ọzọ dịka kayak, ịgba ọsọ mmiri, ịkwọ ụgbọ mmiri na ịgbagharị.
Nature na njem
Ewezuga inye ụfọdụ oke osimiri nke ụwa na ebe mmiri na-aga, Honduras bụkwa ihe okike na njem, yana maka ezi ihe kpatara ya: mpaghara 91 echedoro na ogige ntụrụndụ mba ọnụ maka pasent 27 nke mpaghara mba.
Na Pico Bonito na Celaque National Parks, ndị ọbịa nwere ike ịhụ ụfọdụ ụdị nnụnụ karịrị 750 dị na Honduras.
Obodo ahụ bụkwa ebe obibi nke Río Plátano Biosphere Reserve, nke akpọrọ UNESCO World Heritage Site na 1982; Lancetilla Botanical Gardens, nke abụọ kachasị ukwuu botanical garden n'ụwa; na mbara sara mbara nke mmiri ozuzo na-amaghị nwoke nke dị n’ebe ugwu nke ekwuru.
Honduras bụkwa ebe a na-aga ụgbọ mmiri na Rio Cangrejal, otu n'ime osimiri ndị kasị dị mfe na Central America, na-enye Class II na IV rapids na njem 20-mile site na Pico Bonito National Park ruo Caribbean.
Akụkọ na ọdịbendị
Honduras nwere ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche na njem nlegharị anya dị iche iche, na-enye ndị ọbịa ohere ịmụ banyere ụmụ amaala obodo na oge gara aga.
Ebe obibi ihe ochie nke Mayan nke Copán dị na ọdịda anyanwụ Honduras, nke a na-akpọ UNESCO World Heritage Site na 1980, na-enweta ihe dị ka 100,000 ndị njem nleta kwa afọ na-abịa ịchọpụta ihe fọdụrụ nke nnukwu mmepeanya a yana kọfị dị nso.
Obodo ndị Spain nọ na Gracias na Comayagua so na ndị kachasị mma na Latin America, jiri ụlọ ụka ndị echekwara echekwa na ụlọ akụkọ ihe mere eme ndị ọzọ.
Obodo Garifuna, ụmụ nke ndị ohu Africa, ji mpako na-echekwa ọdịnala ọdịnala ha ma nwee ike ịchọta ha n'akụkụ oke osimiri Caribbean nke Honduras.